मत्ती ७ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद (२०१०)
७ “अरूको न्याय गर्न छोडिहाल ताकि तिमीहरूको पनि न्याय नगरियोस्। २ किनकि तिमीहरूले जसरी अरूको न्याय गर्छौ त्यसरी नै तिमीहरूको न्याय गरिनेछ अनि तिमीहरू जुन नापले नाप्छौ अरूले पनि तिमीहरूलाई त्यही नापले नाप्नेछन्‌। ३ तिमी किन आफ्नो भाइको आँखामा भएको छेस्को देख्छौ तर आफ्नै आँखामा भएको मुढाचाहिं यादै गर्दैनौ? ४ हेर, जब तिम्रो आफ्नै आँखामा मुढा छ भने तिमी कसरी आफ्नो भाइलाई ‘मलाई तिम्रो आँखाको छेस्को निकाल्न देऊ’ भन्न सक्छौ? ५ ए कपटी हो! पहिले आफ्नै आँखाको मुढा निकाल अनि तिमीले आफ्नो भाइको आँखाबाट छेस्को कसरी निकाल्ने भनेर छर्लङ्गै देख्नेछौ। ६ “पवित्र थोक कुकुरहरूलाई नदेओ न त आफ्ना मोती सुँगुरहरूको अगाडि फाल किनकि त्यसलाई आफ्ना खुट्टाले कुल्चीमिल्ची गरेर तिनीहरू तिमीहरूतिर फर्कनेछन्‌ र तिमीहरूलाई आक्रमण गर्नेछन्‌। ७ “मागिरहो अनि तिमीहरूलाई दिइनेछ; खोजिरहो अनि तिमीहरूले भेट्टाउनेछौ; ढकढक्याइरहो अनि तिमीहरूको लागि उघारिनेछ। ८ किनकि जसले मागिरहन्छ त्यसले पाउँछ; जसले खोजिरहन्छ त्यसले भेट्टाउँछ अनि जसले ढकढक्याइरहन्छ त्यसको निम्ति उघारिनेछ। ९ तिमीहरूमध्ये कुन मानिस यस्तो होला, जसले आफ्नो छोराले रोटी माग्दा ढुङ्गा देला? १० अनि माछा माग्दा सर्प देला? ११ त्यसकारण, यदि तिमीहरू पापी भईकन पनि आफ्ना छोराछोरीलाई राम्रा कुरा दिन जान्दछौ भने स्वर्गमा बस्नुहुने तिमीहरूका बुबाले उहाँसित माग्नेहरूलाई झन्‌ कत्ति धेरै असल थोक दिनुहुनेछ! १२ “त्यसकारण, मानिसहरूले तिमीहरूलाई जे जसो गरून्‌ भन्ने तिमीहरू चाहन्छौ, तिमीहरूले पनि तिनीहरूलाई त्यसै गर्नू, किनकि यही नै व्यवस्था र भविष्यवक्ताहरूको शिक्षाको* सार हो। १३ “साँघुरो ढोकाबाट भित्र पस, किनकि विनाशतर्फ लैजाने बाटो फराकिलो र खुल्ला हुन्छ अनि यसमा हिंड्नेहरू धेरै हुन्छन्‌। १४ तर जीवनतर्फ लैजाने ढोका साँघुरो र बाटो अप्ठेरो हुन्छ अनि यो भेट्टाउने थोरै हुन्छन्‌। १५ “भेडाको भेषमा तिमीहरूकहाँ आउने झूटा भविष्यवक्ताहरूदेखि होसियार होओ किनकि वास्तवमा तिनीहरू भोका ब्वाँसाहरू हुन्‌। १६ तिनीहरूका फलबाटै* तिमीहरूले तिनीहरूलाई चिन्नेछौ। के मानिसहरूले कहिल्यै काँडाको झाङबाट अङ्गुर र जङ्गली झारबाट अन्जीर बटुल्छन्‌ र? १७ त्यसैगरि हरेक असल रूखले राम्रो फल फलाउँछ तर हरेक खराब रूखले बिग्रेको फल फलाउँछ। १८ असल रूखले बिग्रेको फल फलाउन सक्दैन, न त खराब रूखले राम्रो फल फलाउन सक्छ। १९ राम्रो फल नफलाउने हरेक रूख काटेर ढालिन्छ र आगोमा फालिन्छ। २० यसकारण झूटा भविष्यवक्ताहरूलाई तिनीहरूका फलबाटै तिमीहरूले चिन्नेछौ। २१ “मलाई ‘प्रभु, प्रभु’ भन्नेहरूमध्ये सबै जना स्वर्गको राज्यमा पस्नेछैनन्‌ तर स्वर्गमा बस्नुहुने मेरो बुबाको इच्छाअनुसार चल्नेहरू मात्र त्यहाँ पस्नेछन्‌। २२ त्यस दिन धेरैले मलाई यसो भन्नेछन्‌: ‘हे प्रभु, हे प्रभु, के हामीले तपाईंको नाममा भविष्यवाणी गरेनौं र? तपाईंको नाममा दुष्ट स्वर्गदूतहरूलाई धपाएनौं र? अनि के हामीले तपाईंको नाममा थुप्रै शक्तिशाली काम गरेनौं र?’ २३ अनि त्यतिबेला म तिनीहरूलाई प्रस्टै यसो भन्नेछु: मैले तिमीहरूलाई कहिल्यै चिनेको छैन! हे कुकर्मीहरू हो, मबाट पर हटिहाल। २४ “त्यसकारण, मेरा यी कुरा सुनेर पालन गर्ने जति सबैलाई चट्टानमाथि आफ्नो घर बनाउने बुद्धिमान्‌ मानिससँग तुलना गरिनेछ। २५ घनघोर पानी पऱ्यो, बाढी आयो, बतास चल्यो र घरलाई बेस्सरी हान्यो तैपनि त्यो ढलेन किनकि त्यो घर चट्टानमाथि बसालिएको थियो। २६ अर्कोतिर, मेरा यी कुरा सुनेर पालन नगर्ने जति सबैलाई बालुवामाथि आफ्नो घर बनाउने मूर्ख मानिससँग तुलना गरिनेछ। २७ घनघोर पानी पऱ्यो, बाढी आयो, बतास चल्यो र घरमाथि बज्रियो अनि त्यो ढल्यो र पूरै ध्वस्त भयो।” २८ जब येशूले यी कुरा भनिसक्नुभयो, तब उहाँको सिकाउने तरिका देखेर भीड छक्क पऱ्यो; २९ किनकि उहाँले तिनीहरूका शास्त्रीहरूले जस्तो होइन तर परमेश्वरबाट अख्तियार पाएको व्यक्तिले जस्तो गरी सिकाइरहनुभएको थियो।
^ मत्ती ७:१२ * “व्यवस्था र भविष्यवक्ताहरूको शिक्षा”-ले सम्पूर्ण हिब्रू धर्मशास्त्रलाई बुझाउँछ।
^ मत्ती ७:१६ * स्पष्ट छ, यसले तिनीहरूका कामलाई बुझाउँछ।